काममा Mavericks: को काममा छ? | Martech Zone
सोमबार, डिसेम्बर 18, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
गत महिना इन्डियानापोलिस मार्केटिंग बुक क्लबले पुस्तक पढ्न मभेरिक्स एट वर्कलाई छान्छ। मलाई किताबहरू मनपर्दछ, र विशेष गरी ब्यापार किताबहरू मन पराउँछन्। मेरो घर उनीहरूले भरिएको छ। म यो पढ्दै छु र भर्खरै सुरू गरें कहिल्यै एक्लो नखानुहोस्: र सफलताको अन्य रहस्यहरू, एक पटकमा एक सम्बन्ध.
माभेरिक्स एट वर्क ती अविश्वसनीय प्रेरणादायक पुस्तकहरू मध्ये एक हो, तर मलाई पक्का छैन कि म ती मध्ये मेरो 'भर्न' पाउँदैछु। टम पीटर्स, गाय कावासाकी, सेठ गोडिन, र मेरा साथीहरू र परिवारले पनि मलाई एक माभेरिक हुन भनिरहेका छन्।
म मुटुको माभेरिक हुँ, तर म विश्वस्त छु कि संसारलाई धेरै माभेरिक्स चाहिन्छ। के हामी?
Maverick: एक एक्लो मतभेदकर्ता, एक बौद्धिक, कलाकार, वा एक राजनीतिज्ञको रूपमा, जसले आफ्ना साथीहरू भन्दा टाढा स्वतन्त्र अडान लिन्छ।
सबै भन्दा पछि, हामीलाई केटाहरू चाहिदैन जो केवल हाम्रो कार फिक्स गर्न, फ्लोरहरु झाँकुन, बसहरु चल्दै, र स्टोर हेर्दै छन्? के प्रत्येक व्यवसायले वास्तवमै माभेरिक्सलाई बढावा दिन सक्दछ? यो त्यस्तो होइन कि मलाई मेरो आफ्नै उद्यमशीलताको बारेमा शंका छ, मलाई मात्र शंका छ कि त्यहाँ त्यहाँ माभेरिक्सका लागि धेरै अवसरहरू छन्।
मेरो एक राम्रो मित्रले मलाई यो किताब कसरी मनपर्‍यो भनेर सोध्यो। मैले जवाफ दिएँ, "मलाई यो किताब मनपर्छ!"
त्यसो भए म फेरि काममा जानुपर्ने भयो। यो त्यस्तो होइन कि मेरो कामले मलाई प्रभावशाली हुन अनुमति दिँदैन ... केवल यो हो सम्पूर्ण रूपमा व्यापार आवश्यक छैन कि काम मा maverick को कदर गर्दछ। तिनीहरू गैर-कन्फर्मिस्टहरू, बाहिरी व्यक्तिहरू, समस्या निवारकहरू हुन्। प्राय: मलाई लाग्छ कि यो म्याभरिक हो जुन अर्को अवसरको खोजीमा समाप्त हुन्छ - किनभने यो त्यहि कहिल्यै थिएन जहाँ उनीहरू भर्खर छोडे।
के म यसमा गलत छु?
समीक्षा र भविष्यवाणी
18 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 2:29 बजे
मलाई लाग्छ कि मानिसहरूले आफूले जे गरे पनि स्वतन्त्र अडान लिन सक्छन्.. पसल परिचर र अटो मेकानिकहरू पनि। मलाई लाग्दैन कि हामीसँग धेरै व्यक्तिहरू हुन सक्छन् जसले "उनीहरू त्यस्तै छन्" भनेर काम गर्न छोड्छन् र यसको सट्टा प्रश्नहरू सोध्छन्, अन्नको विरुद्धमा जाने निर्णय गर्छन्, र परिणाम स्वरूप, हाम्रो वरपरको संसारलाई सुधार्छन्।
जनवरी 26, 2007 10:14 बजे
म सहमत छु, यही कारणले हामीसँग जेसी जेम्स छन् जसले मोटरसाइकल बनाउँछन्, ओरेन्ज काउन्टी हेलिकोप्टरहरू, मोटरसाइकलहरू बनाउँछन्। र तिनीहरूका लागि करार काम गर्ने सबै मानिसहरू। के तपाईलाई लाग्छ कि यी सबै मानिसहरू कन्फर्मिस्ट हुन्, यसलाई जीवनमा सुरक्षित खेल्नुहोस्। यी उदाहरण हुन्। म एक गैर-अनुरूप हुँ। म एक सेतो महिला अमेरिकी हुँ जो एक्यूपंक्चर स्कूल गए। यो लामो3वर्ष थियो। र म एसियाली सभ्य होइन। म भन्न चाहन्छु कि यो गैर-अनुरूपवादी हुनु हो। हामीलाई वास्तवमै थप गैर-अनुरूपवादीहरू चाहिन्छ
18 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 8:28 बजे
म असहमत छैन र मलाई गलत बाटो नलिनुहोस्, न त अर्को भन्दा धेरै मूल्यवान छ। मलाई विश्वास छ कि उत्कृष्ट टोलीलाई 'लिफ्टर र पुशर' चाहिन्छ। यो सोच्नेहरू र त्यो योजनामा ​​कार्यान्वयन गर्न सक्नेहरू।
म मात्र आश्चर्यचकित छु कि उद्योगले कति म्याभरिक्सहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ र यदि त्यहाँ वास्तवमै कुनै कमी छ भने!
18 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 10:30 बजे
म पनि यो सोचिरहेको थिएँ, तर मैले महसुस गरें – सबैजना कहिलेकाहीँ माभेरिक हुन सक्छन्, र अन्य पटक 'उल्टाउने र धकेल्ने' हुन सक्छन् (यसका लागि तिनीहरूको जिब्रो काट्न आवश्यक भए पनि)। सबैले हरेक पटक नयाँ तरिकाले गर्न सुझाव दिएमा यो राम्रो हुनेछैन। तर मलाई लाग्छ कि सबैले सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू सोध्ने ठाउँ छ, विशेष गरी "किन?"। र मेरो अनुभवमा, यो प्रश्न धेरै विरलै सोधिन्छ।
डिसे 21, 2006 मा 10: 47 AM
म सहमत छु। हामीसँग नयाँ विचारहरू धकेल्ने र के हुन सक्छ भन्ने सपना देखाउने मानिसहरू हुनुपर्छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीलाई नयाँ दिशालाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने मानिसहरू चाहिन्छ।
दुबैको लागि समय र स्थान छ। स्थिरता तब हुन्छ जब कुनै नयाँ विचारहरू प्रस्ताव गरिएको छैन। यद्यपि, स्थिरता पनि हुन सक्छ जब धेरै विचारहरू मिश्रणमा फ्याँकिन्छन् र कोही कसैको विचारसँग काम गर्न इच्छुक हुँदैनन्।